Adeemsa laafina sochii dargaggoota Oromoo! | QEERROO
Posted on September 27, 2021 by Qeerroo
Geengoo gartuu kanaa halaala dhaabattee gaafa ilaaltu dargaggoota hojii Oromoo irra oolan fakkaatu. Waa’een Oromoo ajandaa isaanii isa guddaadha. Gurmuun kun barreessaa, wellisaa, namoota qoosaa danda’aan fi walumaa gala namoota hedduu of keessaa qaba.
Kana malees gartuu kana keessa namoota dhaabbi toleeyyii mimmiidhagoo. Kanneen jechi isaanii mi’aa dammaa fakkaatuu of keessaa qaba. Gartuu hojii daldala adda addaa hojjetus qaba. Gurmuu beeksisaas fakkaata. Isaan keessa kanneen seeneen ala garuu hojii barreessuu fi wellisuu nama hojjete hojii isaa beeksisuu hin barbaadan.
Gurmuun kun barreessitoota uummataaf tattaafatanii hojjetan, kanneen hojiin isaanii dhuka qabu hedduu al kallattiin haamilee buusu. Kitaabni gartuu isaaniin ala yoo barreeffame beeksisuu hin barbaadan. Gartuu kana keessaa namni tokko bahee yoo waanuma xiqqoo barreessee kitaaba fakkeessee maxxanse ammoo galma giddu gala aadaa Oromootti kaabineen mootummaa osoo hin hafin bahanii eebbisiisu.
Hojii namoota kanaa baay’ee bilchinaaf icciitaawaan waan mootummaaf dalaganiif irratti hin beekamu. Wellisaas ta’e artistiin garee kana keessaa hojiin inni dhoksaan dalagu uummata biratti salphaatti kan bahee mul’atu miti.
1.2.1. Bifa qoosaan miira uummataa gara kallattii biraatti dhiibuu
Gartuun kun qoosaa waan danda’an fakkaatu. Qoosaan isaanii dhimmoota salqunnamtii dabalatee, dhimmoota adda addaa of keessaa qaba. Akkaataa wantoota araada nama qabsiisanitti dargaggoota oofan dabalatee miidiyaa kana irratti facaasaa oolu. Ajandaan isaanii sammuu dargaggootaa gara seer-maleessummaatti dhiibuudha. Waan babbareedoo fakkaatan agarsiisuu, dhimmoota qaama saalaa dhiiraaf dhalaa facaasuun sagaagalummaaf dargaggoota kaadhimuu dabalatee ajandaa baay’ee dhokataa ta’e qabatanii socho’u.
Miidiyaa hawaasaa kana irraa baayyina waan qabaniif, darbees akkaataa fayyada jechootaaf gargaarama hojii isaanii irraa kan ka’e irratti baruuf baay’ee ulfaata. Uummata fayyaaleyyii dhiisii namoota siyaasaa gowwonfachuuf dandeettii itti qabu. Duubni isaanii garuu gidaara OPDO ti. Sponsor kan godhu illee kaabineef kaadiree mootummaati. Amma gartuun kun biyyoota Itoophiyaa alatti illee of babal’iseera. Gartuun kun siyaasa irraa walaba of fakkeessu. Siyaasni isaanii garuu kan PP ta’uu ammoo hojii isaanii saaxila.
Rakkoo uummata Oromoo dubbachuu hin barbaadan. Ergama isaaniitu isaan danqa isaan dhorka waan ta’eef. Waa’ee hidhaaf hiraarsaa uummata keenya irra gahuu, ajjeechaa saba keenya irra gahu fuula miidiyaa isaaniin dubbachuu hin barbaadan.
Kana qofa miti ajandaan uummata Oromoo fayyadu dhageettii akka argatu hin godhan. Karaa irratti hin beekamneen ajandaan uummata fayyadu akka bushaa’u taasisu.
Wayiita ajandaan saba keenya Oromoo fayyadu lakkifamu, itti yaadanii isaan ammoo ajandaa bililcii wayii tokko gadi gadhiisu. Kunis waa’ee akkaataa qaama saalaa dhiiraaf durbaa dabalatee jechuudha. Ajandaawwan gati dhabeeyyii akkanaatti akka sabni keenya yeroo isaa gubu, dargaggeessi taa’ee waa’ee xebexebaaf xibaara maayii hin qabne akkanaatti akka yeroo isaa dabarsu taasisu. Gartuun kun Rirma sammuu dargaggoota Oromoo nyaate jechuunii dandeenya.
Wantoonni haala kanaan uummata keessa deddeemaa jiran akka dargaggoonni Oromoo yaada isaanii gara hin malletti haqaaqan taasiseera. Ajandaa siyaasaa keessaa bahee akka dargaggeessi gara waan isa illee hin fayyadne dhimmoota sagaagalummaaf gaa’eela hin barbaachifneetti akka oofamnuuf daandii saaqaniiru.
Oromoon dargaggoota ajandaa dhokataa qabatanii socho’aa jiran kanneen ilaalee addaan baafatee of irraa dinninuu qaba. Tooftaa mootummaan PP dhimma itti bahaa jiru kanneen namoota oofan haalaan addaan baafatee of irraa dhorkuuf yoo kan deebi’an ta’e gorfatee deebifachuu akka qabun dhuma barruu kanaan dhaama!
WBO’n haa waaru!